लकडाउनका बेला घरमा ए’क्लै बस्न बो’र भ’एपछि ! – Life Nepali
लकडाउनका बेला घरमा ए’क्लै बस्न बो’र भ’एपछि !
कोरोना भाइरस फै’लिन नदिन विश्वको ठूलो हिस्सा लकडाउनमा छ। मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन न पाउने अवस्था छ। यसले एउटा समूहलाई चाहिँ थप जो’खिममा पारेको छ, हि’सा भो’गिरहेका महिला। घरेलु हिं’साको च’पेटामा परेका महिला र केटाकेटी लकडाउनका कारण दोहोरो म’र्कामा परेका छन्। लकडाउनसँगै विश्वभर महिलामाथिको वृद्धि भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
ब्राजिलदेखि जर्मनीसम्म, इटालीदेखि चीनसम्म घ’टनामा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । लकडाउनको समयमा महिलाका लागि कोरोना भाइरस मात्र होइन, लैं’गिक हिं’सा अर्को म’हामारी बनेको छ। अर्थात्, पी’डित महिला दोहोरो म’हामारी भोगिरहेका छन्। कोरोना महामारी त कुनै दिन अ’न्त्य हुनेछ, तर हिं साको महामारी कहिले अ’न्त्य हुने हो,यकिनसाथ भन्न सकिन्न। यसै क्रममा पूरै देश कोरोनाले आ’तंकित भइरहेको र आफैँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम इटालेली सरकारले लगाइरहेका बेला क्यानडेली कम्पनी पो र्नहबले त्यहाँका बासिन्दालाई एक महिनासम्म सित्तैमा प्रिमियम भिडियो हेर्न दिने घोषणा गरेको छ।
‘यो बेला घरबाट बाहिर निस्कने होइन,’ हबलाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार गार्डियनले भनेको छ, ‘घरैमा एक्लै कसरी बस्नु ? यसको विकल्पका रुपमा हामीले हाम्रो प्रिमियम सेवा सबै इटालेलीलाई सित्तैमा दिने निर्णय गरेका हौँ। यसले उहाँहरुको एकल जीवनमा चार चाँद लगाउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।’ ग’म्भीर समयमा कम्पनीको यो विज्ञापन गर्ने शैलीलाई भने केहीले वि’रोध गरेका छन्।
Previous शिक्षिकालाइ आठ कक्षा पढ्ने बिद्यार्थीले भ’गाएपछि !
Next पत्याउनु हुन्छ ? एउटा अंगुर को गुच्छालाई पर्छ १२ लाख रुपैयाँ ! यस्तो छ यो अंगुरको वास्तविकता –